खुंखार अभिनय गर्न सक्ने हिरो ‘अभय’ किन पछाडी ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
खुंखार अभिनय गर्न सक्ने हिरो ‘अभय’ किन पछाडी ?
[dropcap]जी[/dropcap]वन पशु रूप मा होस् या कीरा फट्यांग्रा कै रुपमा या मानवको रुपमा। जीवन एक यात्राको समान छ। किनकी प्रत्येक जीवनको अन्त्य पनि निश्चित नै छ, अतः जीव केहि समयको यात्रामा आउने गर्छ र अन्ततः जानैपर्छ। मानव सबै जीवमा एक सर्वोत्कृष्ट जीव हो। यहि सर्वोत्कृष्ट जीवनलाई सार्थक बनाउन हरतरहले मानिस लागेको लागेकै छन्। कति छिट्टै सफल छन् भने कतिलाई केहि समय लाग्छ। जसले संघर्ष गरेर हार खाँदैन उसको जीत अवश्यंभावी छ।
चाहे त्यो कला क्षेत्रमा होस् या अन्य कुनै क्षेत्रमा, अनेकन सपमा साँचेर संघर्षमा उत्रिनेहरु निकै छन्। नेपालगञ्जमा जन्मेका अभय चन्द पनि यस्ता व्यक्ति हुन् जसले चलचित्रको हिरो बन्न दशक खर्चिसकेका छन्। धेरै चलचित्रमा मुख्य भुमिका पाएपनि उनले पाउनुपर्ने जति सफलता पाउन सकेका छैनन्। भनिन्छ, नेपालमा छवि ओझा निर्माता रहेको चलचित्रमा प्रवेश गरेपछि उसले पछि फर्केर हेर्नुपर्दैन। लामो समय चलचित्रमा खर्चेका चन्दले पनि छवि क्याम्पको संगतले धेरै प्रगती गरिसकेका छन्।
अभय ‘हमेशा’ नामक चलचित्रबाट छवि क्याम्पमा छिरिसकेका छन्। ‘हमेशा’मा मुख्य भुमिका हुँदा-हुँदै पनि उनले त्यति नाम कमाउन सकेनन्। ‘शपथ’ नामक चलचित्रमा नायक भएर रजतपटमा आएका अभयले हाल रेखा थापाको ‘हिम्मतवाली’मा मुख्य भुमिका निभाईरहेका छन्। त्यसलगत्तै उनले कमलकृष्णले निर्देशन गर्ने चलचित्र ‘जोडदार’मा पनि मुख्य नायकको भुमिका गर्दैछन्। कमलकृष्ण यसअघिनै अभयको काम देखेर प्रभावित थिए। अभयले नेपाली चलचित्रमा बाह्र बर्ष देखी संघर्ष गरिरहेका छन्।
हाल छायांकनमा रहेको ‘हिम्मतवाली’का फाईट डाईरेक्टर चन्द्र पन्तको नजरमा अभय एक खुंखार द्वन्द्व गर्न सक्ने कलाकार हुन्। अभयले नृत्य पनि उत्तिकै लोभलाग्दो गर्ने गरेको पन्तले ठुलोपर्दा डटकमलाई बताए। अभयले रिलिजको क्रममा रहेको ‘एक्सिडेन्ट’ नामक चलचित्रमा पनि मुख्य भुमिका निभाएका छन्।